Tag Archive for "एटिएम" - अरे वा ! पैसा, पैसा, पैसा ....उर्फ 'मनीगड’
♥ सन्ताेष खड्का ♥ २४ घण्टामा मान्छेले सबैभन्दा बढी केको बारेमा सोच्छ होला ? सेक्स वा पैसा ? दिनभरिको सारा भागदौड केका लागि ? पैसा नभए जिन्दगी चल्छ ? पैसा ठुलो कि सम्बन्ध ? कति करोड , अर्ब वा खर्ब कमाएपछि पुग्छ ? विश्वका अर्बपतिहरु केका बारेमा सोच्छन् होला ? राम्रो काम गर्न पैसा चाहिँदैन ? तपाईले आजसम्म कहिल्यै सोच्नु भएको छ ? २४ घण्टामा म र अन्य मान्छेहरु केका बारेमा सोचिरहेका हुन्छौ ? किन व्यस... थप पढ्नुहोस्
काठमाडौं । एटिएमको ताला फोडेर पैसा चोर्न खोज्ने एक जनालाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ । काठमाडौं महानगरपालिका १४ कलङ्कीस्थित एसबिआई बैंकको एटिएमको ताला फुटाउँदै गरेको अवस्थामा बारा कलैया नगरपालिका घर भई ललितपुर सातदोबाटो बस्दै आएका रोहित शर्मालाई पक्राउ गरिएको प्रहरीले आज जानकारी दिएको छ । उता बूढानीलकण्ठ नगरपालिका ३ चपली बस्ने उदयपुरका ४२ वर्षीय खगेन्द्र राईको काठमाडौँ महाराजगञ्जस्थित करु कन्स्ट्रक्... थप पढ्नुहोस्
काठमाडौं । मुक्तिनाथ विकास बैंकले नयाँ सेवाको सुरुवात गरेको छ । अब घरमै बसी बसी खाता खोल्न मिल्ने गरी अनलाईन सेवाको शुरुवात गरेको हो । बैंकले सर्वसाधारणहरुलाई सेवा दिने हेतुले घरमै बसेर अनलाईनबाट खाता खोल्न सकिने व्यवस्था ल्याएको छ । देशभित्र तथा बाहिर रहेका समस्त नेपाली नागरिकहरुले यस प्रविधिको माध्यमबाट बैंकमा खाता खोल्न सक्नेछन् । उक्त सेवाबाट ग्राहकहरुले आफ्नो समयानुकुल बैंकको वेवसाईटबाट खाता... थप पढ्नुहोस्
किन बन्द हुँदैछन् भारतमा १ लाख १३ हजार एटीएम मेशिन ?
काठमाडौं । भारतमा सन् २०१९ को मार्चदेखि १ लाख १३ हजार एटिएम मेशिन बन्द हुन सक्ने बताइएको छ । नयाँ नियम कार्यान्वयनमा ल्याएका कारण देशभर रहेका २ लाख ३८ हजार एटिएम मेशिनमध्ये १ लाख १३ हजार एटिएम बन्द हुन सक्ने देखिएको छ । शहरी तथा ग्रामीण क्षेत्रमा समेत त्यसको सोझो असर पर्ने भारतीय सञ्चारमाध्यमहरुले जनाएका छन् । भारतको आर्थिक राजधानी मुम्बईको एटिएम उद्योगसँगा जोडिएको संगठन सीएमटीएमआईले चेतावनी दिदै... थप पढ्नुहोस्
एटिएमबाट रकम निकाल्ने टर्कीस नागरिक पक्राउ
२२ भदौ, काठमाडौं । नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरोले एटिएमबाट अनाधिकृत रुपमा रकम निकाल्ने एक टर्कीस नागरिकलाई पक्राउ गरेको छ । ब्यूरोबाट खटिएको टोलीले अनाधिकृत रुपमा पैसा निकाल्दै गर्दा ३० वर्षीय टर्कीस नागरिक इक्रिम अरम्यानकीलाई मंगलबार पक्राउ गरी हिजो सार्वजनिक गरेको हो । ब्यूरोले पक्राउ परेको व्यक्तिसँग एक हजार २२५ युरो, नौ हजार ७१० अमेरिकन डलर, ३३ हजार इण्डोनेशियन रुपिहा, ३४ वट... थप पढ्नुहोस्